Beyle: Waxaan Rajeynaynaa in Deymaha Nalaka Cafiyo Sanadkan – Goobjoog News
Beyle: Waxaan Rajeynaynaa in Deymaha Nalaka Cafiyo Sanadkan
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliaydda Somaaliya ayaa sheegay in sanadkan ay Soomaaliya raja badan ka qabto in la soo geba gebeeyo dadaalada loogu jiro in dalka laga cafiyo deymaha lagu leeyahay.
Arrintan waxaa uu ka sheegay shir jaraa’id, isaga oo ku faah faahiyay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda Maaliyadda sanadkii tagay 2018 iyo qorshah au degsan wasaaradd asanadka 2019.
Wasiir Beyle waxaa uu sheegay in 2-dii sano ee la soo dhaafay daqliga soo gala dowladda uu kordhay 64% boqolkiiba,markii ay wasaaraddu xoojisay nidaamka canshuuraha lagu qaado ee dalka gudihiisa,taasi oo uu ku tilmaamay in wax badan ay ku soo kordhisay daqliga soo xarooda.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dowladda ayuu tilmaamay in labadii sano ee u dambeysay ay ku guuleysatay wasaaraddu bixinta mushaharaadka Ciidanka iyo shaqaalaha dowladda,islamarkaana sanadkaan ay rajaynayso si la mid ah sanadihii hore.
Miisaaniyadda sanadkaan oo ka kooban 344 Milyen ayuu sheegay in 200 milyen oo ka mid ah wasaaradda ay ka rajaynayso in uu ka yimaado dakhligu gudaha laga soo aruuriyo.
Dhaqaalaha Soomaaliya ee waqtigaan marka lala meel dhigao dalalka kale waa mid aad u yar si loo gaaro isku filnaan iyo kobac dhaqaale,wuxuuna u ku buuriyay muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay bixiyaan casnhuuraha si loola baratamo dowladaha kale ee caalamka.
Dhageyso: Jubbaland Oo Wadda Xallinta Tabashada Shacabka Gedo
Garoowe: Wadayaasha Mootooyinka Bajaajta Oo Cabasho Ah (Dhageyso)
Dhageyso: Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Shacabka Oo Sheegay In Howlgallada Jubbaland Ka Socda Yihiin...